Dowladda Cummaan: Yahuuda Waa dowlad kajirta Bariga-Dhexe(Dhagayso Warbixin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Cummaan: Yahuuda Waa dowlad kajirta Bariga-Dhexe(Dhagayso Warbixin)
On Oct 29, 2018 256 0
“ Yaa ka mamnuucay Natanyahu inoo yimaado, majiro qof halkan aan imaan Karin, Yahuuda waa dowlad jirta oo ka dhisan bariga dhexe”, sidaas waxaa yiri wasiirka arimaha dibadda dalka Cummaan Yuusuf bin Calawi, mar uu ka hadlayay booqasho dhawaan uu dalkaas ku yimid ra’iisul wasaaraha Yahuudda bin Yamin Natanyahu.
Si aan horay loo arag, waxay dowladaha Carabta ku tartamayaan una deg degayaan sidii xiriir diblumaasiyadeed oo muuqda ula yeelan lahaayeen maamulka ku dhisan dhul boobka iyo leynta shacabka Filastiin, xoogana ku heysta beytul Maqdas iyo halkii loo dheelmiyey Nabigeena Muxamed Sallaahu caleyhi wassalam ee Masjidul Aqsaa.
Dhowr maalmood kahor, waxaa magaalada Masqadh ee caasimadda dalka Cumman booqasho aan horey loo shaacin ku yimid wafdi uu hogaaminayo ra’iisul wasaaraha Yahuuda bin Yamin Natanyahu.
Natanyahu waxaas safarkiisa ku wehlinayay taliyaha sirdoonka Yahuuda Musad ninka lagu magacaabo Yusi Kohin, wasiiraka arimaha dibadda Yahuuda iyo xaaska Natanyahu Sara, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyey madaxtooyada wadankaas madaxweynaha saldanada Cummaan Suldaan Qaabuus bin Siciid.
Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Cummaan, labada dhinac waxay kawada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa waxa loogu yeeray xasiloonida iyo nabadgeliyada bariga dhexe, waxayna dadku inbada is waydiinayaan nabadda lagala hadlayo Yahuuda oo xoog ku heysta dhulka Filastiin.
Inkastoo saldanada Cummaan ay ku andacootay in booqashadan uu Natanyahu codsaday, hadana war kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha Yahuuda waxaa lagu sheegay, in ra’iisul wasaaraha uu helay codsi ku aadan inuu soo booqdo dalka Cummaan.
Natanyahu wuxuu shaaca ka qaaday inuu aad ugu faraxsanyahay booqashadan uu ku tilmaamay taariikhiga ah ee uu markii ugu horeysay ku yimid dalka Cummaan, wuxuuna sheegay in maamulkiisu ku gacan siin doono dowladda Cummaan arimaha Technologiyada, Amniga iyo Dhaqaalaha.
Ma ahan dalka Cummaan oo keliya, waxaa dalka Imaaraadka carabta ku sugan wafdi ka socda maamulka Yahuudda, kaas oo ka qeybgalaya ciyaar ka socota wadankaas.
Wararka la helayo waxay sheegayaan in ciyaarta ka socota magaalada Abu Dubai uu ku guuleystay ciyaaryahan Yahuudi ah, waxaana markii ugu horeysay magaalada laga shiday heesta astaanta u ah jiritaanka maamulka Yahuudda.
Wasiiradda Ciyaaraha, Iyo dhalinyarada ee maamulka Yahuudda oo goobjoog ah halka ay ka dheeyso ciyaarta ayaa la arkayay iyadoo aad u ilmeneysay, waxayna sheegtay iney la ilmeyneyso guusha usoo hootay maamulka Yahuudda, maadama markii ugu horeysay astaanta qarankooda laga shiday magaalo ay leeyihiin dadka muslimiinta, sida ay hadalka u dhigtay.
Maamulka Aala-sucuud, Qadar, Baxreyn iyo kuwa kale ayaa cilaaqaad hoose la leh maamulka Yahuudda, waxaana marar badan magaalada Tallab’iib tagay saraakiil sar sare oo katirsan maamulka Aala-sucuud oo uu ku jiro Anwar Cishiqi, iyadoona xitaa sidoo kale warbaahinta Yahuuuda ay xilli hore sheegeen in Talla’biib uu booqasho qarsoodi ah ku yimid dhaxalsugaha Aala-sucuud Muxamed bin Salmaan.
Waxaa muuqata in maamullada carbeed oo xilliyadii hore dadka ku beer laxowsanjiray qadiyadda FIlastiin ay hadda si toos ah ugu biirayaan safka Yahuuda, waxaana la filan karaa sanadaha soo socda haddii ay xaaladu sidan kusii socoto in dowlado carbeed ay safaarado ka furtaan magaalada Al-Qudus oo Donald Trump u aqoonsaday caasimadda Yahuudda.
Halkan ka dhagayso Warbixin dowladaha Carabta oo ku tartamaya Raalli-gelinta Yahuudda.